Amaphepha emfundo, iincwadi, ikharityhulamu yokulungisa iimpapernerds
NgoJanuwari 16, 2021
Ababhali besiporho banobuchule obuyimfuneko kwindawo yokulungisa
Ukufunda kwakhona kunye nokuhlela ziinkqubo ezimbini ezahlukeneyo ezisetyenziselwa ukuphucula isicatshulwa. Isenzi sokulungisa sinemvelaphi yesiLatin. ICorrigere kuthetha ukuphucula, ukulungisa. Ukuba isicatshulwa sivavanyiwe, iimpazamo ziyalungiswa. Iimpazamo zinokubakho ngokwegrama, okanye ngokuchanekileyo nangokumiselweyo. Ngokuchasene nokuhlela, uvavanyo-fundo aluthatheli ingqalelo uphononongo lwesicatshulwa ngokubhekisele kwisimbo, isitayile sokubhala kunye nokungaguquguquki. Nokuba umsonto obomvu ukhona kwisicatshulwa okanye akunjalo, nokuba kukho ukungangqinelani kwesitayile okanye nokuba isicatshulwa asihambelani nesihloko ayingomsebenzi wokuvavanywa kovavanyo. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba umvavanyi wokuvavanywa ngamava uya kuthatha inxaxheba okanye awugqibe umsebenzi wokuhlela. Kungenxa yokuba ukuvavanywa kokuhlela nokuhlela kuyimisebenzi emibini eyahlukeneyo kodwa ehambelanayo, kubalulekile nakweyiphi na imeko ukucacisa ukuba ingaba kufuneka kwenziwe uvavanyo lokuvavanywa kwakhona olongezelelweyo ngaphambi kokuba kuqalwe ukufundwa kokuvavanywayo. Oku ngokuqinisekileyo kunempembelelo kubume beendleko.
Ukuphononongwa kwakhona, akwanele ukuba nenkqubo yegrama ehambelanayo esebenzayo kwiPC yakho. Yonke inkqubo yopelo iqaphela kuphela iimpazamo zegrama kunye nopelo. Iitypos ezikhokelela kwigama elichanekileyo ngokwemeko- umz. B. endaweni ka "kwaye" kubhaliwe "thina" - inkqubo yopelo ayiyiboni njengempazamo. Ukuvavanywa kokuvavanywa komsebenzi ofunekayo sesona sizathu sokufumana ezi mpazamo zincinci kodwa zibalulekileyo kwisicatshulwa.
Ukutshekisha ukuchaneka nako kuyimfuneko kwikowuteshini ngaphakathi kwesivakalisi. Apha, kwakhona, iinkqubo zopelo ezihlanganisiweyo kwinkqubo yokubhaliweyo zifikelela kwimida yazo. Kwimibhalo yefilosofi apho umntu athanda ukusebenza nezivakalisi ezihleliweyo, kuluncedo ukuba nomntu onobuchule ekufundeni ukuphononongwa. Iziphumlisi ezingalunganga okanye ezingekhoyo ziyajongwa. Iziphumlisi ezichanekileyo zibalulekile ekuqondeni nasekufundeni isicatshulwa. Iziphumlisi ezingachanekanga zinokunika isivakalisi esidlekileyo intsingiselo entsha ngokupheleleyo umbhali ebengayifuni.
Ukuvavanywa kokuvavanywa kwakhona kuyafuneka kuzo zonke izicatshulwa ezipapashwe nangaluphi na uhlobo. Oku kunokuba zezi:
Iincwadi ekubhekiswa kuzo
Ukuvavanywa kokuvavanywa kwakhona kubandakanya ukujonga ukuthotyelwa kweemfuno ezisesikweni. Iimfuno ezisesikweni zibhekisa kwisicatshulwa sonke kubandakanya imibhalo esemazantsi, ibhibliyografi, uluhlu lwamanani kunye neetafile. Ngokukodwa, imibhalo esemazantsi kunye nencwadi yeebhayiloji zinamathuba amaninzi eempazamo. Imibhalo esemazantsi kufuneka iqondwe njengezivakalisi ezifuna iziphumlisi ezichanekileyo. Kuxhomekeka kubungakanani bombhalo osemazantsi, inqaku kufuneka libekwe ekugqibeleni.
Ukuvavanywa kokuvavanywa kuyinto eqhelekileyo emsebenzini wokufunda kwaye kucetyiswa kaninzi ngoonjingalwazi. Kuba emva kokuba umsebenzi ubhaliwe phantsi, umbhali kwelinye icala wonwabile kuba uwenzile. Kwelinye icala, umbhali udinwe kakhulu kukuzifundela. Ukuvavanywa kokufundwa kwakhona kufuna ukufundwa kwegama ngegama. Inyathelo lokuqala kukuqinisekisa ukuba ulwakhiwo lwezivakalisi luchanekile nokuba ugcina iso kwiziphumlisi. Kwisinyathelo sesibini, wonke umsebenzi ujongiwe ukuthobela imigaqo. Kwinqanaba lokugqibela, iphepha lonke lifundwa kwakhona. Kwiimeko ezininzi, iimpazamo ezimbalwa zifunyenwe.
Ngaphandle kwako konke ukuchaneka nokulungiswa, kusenzeka ukuba nomvavanyi-mava onamava angayijongi impazamo. Akukho mntu ugqibeleleyo.
Ukuba ubhale iphepha lezenzululwazi, kuya kufuneka uqwalasele ukuphononongwa kwakhona. Ababhali abasebenza ne-arhente yethu yokubhala ghost baneminyaka emininzi yamava ekufundeni kwakhona. Ngesiqhelo, ukuphononongwa kokuvavanywa akubhekiseli kuphela kwimibhalo yolwimi lwaseJamani. Sikwanababhali abanobuchule kwizicatshulwa zesiNgesi okanye olunye ulwimi. Ixesha lokulungiswa lixhomekeke kubude kunye nobunzima besicatshulwa sakho.
Ukuba ungathanda ukuhlela ukongeza ekufundweni, oko akuyongxaki nokuba kunjalo, kuya kufuneka unike ababhali bethu ixesha elaneleyo lokufunda kwakhona nokuhlela. Ukulungiswa ngokuchanekileyo komsebenzi wakho wesayensi akunakwenziwa ngokukhawuleza. Iminqweno nemibono yakho ngumceli mngeni kuthi.
Uqinisekiso lwethu lomgangatho kwindawo yokulungiswa